अमेरिकी प्रतिबन्धले मरिरहेका छन् निर्दोष सिरियाली – Dcnepal
हसन इस्मालिक (फरेन पोलिसी)
प्रकाशित : २०७७ चैत २४ गते २१:१८
A man and woman carry malnourished children atacamp for Syrians displaced by conflict near the town of Deir al-Ballut by Syria's border with Turkey in the Afrin region in the northwest of the rebel-held side of the Aleppo province on September 28, 2020. (Photo by Rami al SAYED / AFP) (Photo by RAMI AL SAYED/AFP via Getty Images)
गत हिउँदमा मेरो एक जना साथी तिनको ओछ्यानमा मरेको भेटियो किनभने तिनको ओछ्यानमा तताउने कुनै कपडा थिएन। किन ? किनभने अमेरिकी प्रतिबन्धले बशर अल असदको सरकारभन्दा साधारण मानिसहरूलाई चोट पुर्याइरहेको छ। प्रति दिन एक घण्टा वा त्योभन्दा धेरै बिजुली हुन्छ।
गत महिना मेरो फोन बज्यो। दमास्कसका एक जना नातेदारले मलाई एउटा सिरियाली बालक मोहम्मद डाफिसलाई मदत गर्न आग्रह गरे। दुई वर्षीय मोहम्मदको परिवारले खाना पकाउनका लागि प्रिमस केरासेन स्टोभ प्रयोग गर्छन्। नुहाइरहेको तातो पानीका लागि बोइलर छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक इन्धन सुरक्षित गर्न सरकार असक्षम भएका कारण सिरियामा विद्युत्को माग उच्च स्तरमा पुगेको छ।आफ्नो उमेरको कुनै पनि बच्चाजस्तै मोहम्मद पनि ३०० वर्ग फुटको अँध्यारो घरमा आफ्ना भाइबहिनीहरूसँग खेल्दै थिए। मोहम्मद प्रिमस स्टोभमा आफ्नी आमाले तताएको तातो पानीको टबमा खसे। तर अँध्यारो घरमा मोहम्मदले टब देखेनन्।
तिनको चिच्याहट सुनेर आमा तिनीकहाँ दगुरिन्। तिनका बुबा, सडक विक्रेता, युद्धबाट घाइते खुट्टाको कारण ह्वीलचेयरमा मात्र सीमित थिए र सकेसम्म छिटो उनीकहाँ गए। तिनीहरूले त्यस बालकलाई हतार हतार सरकारी सुविधा भएको दमास्कसस्थित अल मोजटाहेद अस्पतालमा पर्याए। जलिरहेको र रगत बगिरहेको बच्चाको अवस्था झन् झनै बिग्रँदै गयो। त्यसपछि तिनलाई रगत दिनुपर्ने भयो।
तिनको पीडा र पीडाको बावजुद सरकारी डाक्टरहरू निस्सहाय भए। ट्रान्सफ्युज गरिएको रगत सङ्क्रमण भयो। मोहम्मदको परिवारले अब तत्कालै उनलाई निजी अस्पतालमा सरुवा गर्नुपर्ने भयो। तर ट्रलीमा टमाटर बेच्ने बाबुले कसरी बिल तिर्न सक्छन्?
सिरियामा औसत तलब प्रतिदिन २ अमेरिकी डलरभन्दा कम हुन्छ। मोहम्मदका बुवाले दैनिक एक डलर पनि कमाउन सक्दैनन्। सिजर सिरिया नागरिक संरक्षण ऐन २०१९ मा तत्कालीन अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेको कानुन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई क्रूर सरकार विरुद्ध न्यायको शक्तिको विजयको रूपमा प्रयोग गरेको भनिएको थियो। तर यो कार्यले न्याय ल्याएको छैन। बरु, यसले भोकमरी, अन्धकार, महामारी, दुःख, डकैती, अपहरण र राष्ट्रको विनाश ल्याएको छ। थुप्रै निकायहरू सिजर अधिनियमको पतन होला कि भनेर डराउँछन्।
यो असदको बारेमा होइन। जसरी हामी कहाँ जन्मेका हौं भनेर छनौट गर्दैनौं, त्यसरी नै हामीहरूले पनि आफ्नो सरकार रोज्नसकेनौ। प्रतिबन्धको सामना गर्दै असद इरानी समर्थनमा भर परेका छन्। जसले सिरियालाई अझ बढी हानि पुर्याउनेछ, जब साधारण नागरिकहरूले दुःख भोगिरहनु पर्नेछ।
मोहम्मदको बुबा मेरो नातेदारतिर फर्के र उनले मलाई त्यस बालकको आगोको चित्र खिच्न पठाए। म असाध्यै विचलित भएँ र मद्दत गर्न मैले हर प्रयास गरें। धेरै कठिनाइ भएपछि मोहम्मदलाई निजी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। तर, सिरियामा भने निजी अस्पतालहरु समेत बाँकी विश्वमा जस्तै सुसज्जित छैनन् । यस महामारीको सुरु सुरुतिर संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणहरू प्राप्त गर्न कसरी सङ्घर्ष गरे भन्ने कुरा सम्झनुहोस् त? अक्सिजनको अभाव र आधारभूत चिकित्सा सामग्रीको कारण सिरियालीहरू अझै पनि दिनहुँ यही अनुभव गरिरहेका छन्।
डाक्टरहरूले मोहम्मदका बुबालाई त्यो सानो बालक सिरियामै बसेको खण्डमा बाँच्ने छैन भनी जानकारी दिए। त्यसैले म हतारहतार लेबनानको बेरूतस्थित एउटा सुविधासम्पन्न निजी अस्पतालसँग सम्पर्क गर्न गएँ। त्यो अस्पताल कारबाट केही घण्टा टाढा थियो। धेरै बिन्ती गरेपछि हामीले एउटा बेड भेट्टायौं। दुवै देशका रेडक्रस र रेडक्रिसेन्ट एम्बुलेन्सहरूले उक्त बच्चालाई सिरिया–लेबनानको सीमा पार गराए।
नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गरेको बेरुतस्थित अस्पतालका डाक्टरहरुले मोहम्मदलाई बचाउने प्रयास गरेका थिए। छ दिनसम्म बालकले संघर्ष गऱ्यो। तर लेबनानमा समेत उन्नत चिकित्सा उपकरणहरूको अभाव छ। अस्पतालको बिल १,००,००० अमेरिकी डलरभन्दा बढी थियो। भाइरल संक्रमणको कारण तिनको मिर्गौला फेल भयो र अन्ततः तिनको मुटु रोकियो। प्रतिबन्ध प्रेरित अभावको कारण मर्ने अन्तिम सिरियाली बच्चा उनी होइनन्।
१० वर्षमुनिका कुनै पनि सिरियाली केटाकेटीले आफ्नो देश शान्तिमा भएको कहिल्यै देखेका छैनन्। अनि आर्थिक अवसर नभएको देशमा तिनीहरू भोकभोकै रहन्छन् र आधारभूत चिकित्सा उपचारबाट वञ्चित छन् भने अन्ततः मध्यपूर्वमा आतंकवादको नयाँ प्रकोपको पैदल सिपाही बन्न सक्छन्। इरानका धेरै मुल्लाहरूले आफ्नो राजनीतिकृत मस्जिदहरूमा नियमित रूपमा ‘अमेरिका मुर्दावाद’ र ‘इजरायल मुर्दावाद’को भाकल गर्छन्। अमेरिकी प्रतिबन्धको बावजुद सिरियालीहरूको त्यस्तो संस्कृति छैन। तर अभाव र विदेशी प्रभावले परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्न सक्छ।
वास्तवमा, मध्यपूर्वमा बढ्दो आतंकवाद सधैं संयुक्त राज्य अमेरिकासम्म पुग्छ र यो यसको अन्तिम लक्ष्य हो भन्ने कुरा ९–११ वर्षदेखि स्पष्ट भएको छ।
यदि अमेरिकी रणनीति सिरियालीहरूलाई असदलाई परास्त गर्न जबरजस्ती गर्ने हो भने यसले काम गरेको छैन र गर्ने छैन। मानिसहरू सरकारको मसर्थनमा भेला हुनेछन्। अमेरिकी प्रतिबन्धको अधीनमा फिडेल कास्ट्रोको क्युबाबाट यही पाठ सिक्नुपर्छ। सीमा पार गरेर हेर्नुहोस् जहाँ ईरानले अहिले धेरैजसो इराक र लेबनानलाई नियन्त्रण गर्छ। के वासिङ्टन सिरियामा खाली ठाउँ बनाउन चाहन्छ जहाँ टर्की वा इरानका प्रोक्सीहरूले गृहयुद्धको पुनरावृत्ति गर्छन्, जसले ईरानलाई सीधै इजरायलको सामना गर्न अझ नजिक ल्याउँछ।
सम्पूर्ण राष्ट्रलाई सामूहिक रूपमा सजाय दिनु हुँदैन। मोहम्मदको परिवार घाइते र अशक्त आमाबाबु भएका लाखौं मध्ये एक मात्र हो।
सन् २०११ देखि ५ लाखभन्दा बढी सिरियालीहरूको मृत्यु भएको छ। युद्धअघिको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी अर्थात् झन्डै १३ लाख मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। धेरै जना युरोपतिर लागिरहेका छन् र चाँडै प्रतिबन्ध हटाइएन भने पश्चिमका अरू देशमा थुप्रै शरणार्थी बन्नेछन्। भूमध्यसागर पार गरेर आफ्नो यात्रामा तिनीहरूले केही गुमाउनुपर्ने छैन। तिनीहरूले आफ्नो क्रोध पनि तिनीहरूको साथमा बोकेर लैजानेछन्।
असदसँग पश्चिमको गुनासोले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई सामूहिक रूपमा सजाय दिनु हुँदैन।
यद्यपी विदेश मामिलासम्बन्धी युरोपेली संघका मन्त्री जोसेप बोरेलले गत महिना आफ्नो वक्तव्यमा सिरियाली जनतालाई दण्डित गर्न आग्रह गर्दै युरोपेली संघले ‘देशमा राजनीतिक संक्रमण सुरु हुनुभन्दा अघि सिरियामा लगाइएको प्रतिबन्ध नहट्ने’ बताए।
राजनीतिप्रतिको यस्तो निर्बुद्धि दृष्टिकोणले मध्यपूर्वको वास्तविकता बुझ्न वा मोहम्मदजस्ता साधारण केटाकेटीको जीवनप्रति चासो देखाउन सकेको छैन। प्रतिबन्धले काम गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुको सट्टा बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले आफ्नो प्रतिबन्धलाई नवीकरण गरेका छन्। पूर्व इराकी नेता सद्दाम हुसेन, लिबियाका पूर्व नेता मुअमर अल गद्दाफी र क्यास्ट्रोलाई प्रतिबन्धबाट हटाइएको थिएन। इरानका अयातोल्लाह अली खामेनी पनि पछारिका छैनन्। यो अक्सर अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई दोष दिने पागलपनको परिभाषा हो – ‘एउटै काम बारम्बार गर्नु र फरक फरक परिणामको आशा गर्नु।’
के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, अमेरिकी कांग्रेस र युरोपेली नेताहरू राति सुत्न सक्छन् जबकि राजनीतिज्ञहरूले सिरियाली सरकारको विरोध गर्न कठोर काम गरेको हेर्न चाहन्छन्, केवल भोक, अत्याचार र सीमान्तकरणले गर्दा सम्पूर्ण मानिसहरू मर्छन्।
तिनले आफ्ना दुई जना छोराछोरी गुमाए र आमाबाबुको दुःखको मूल्यांकन गर्न तिनी विशिष्ट अवस्थामा छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको अप्रभावी प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ, सिरियालीहरूलाई जीवनमा नयाँ मौका दिनुपर्छ र कुरूप शक्ति राजनीतिले नष्ट गरेको कुरा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। लेखक जोेडर्नका अभियन्ता हुन्।